गोपी मिजारको दर्दनाक कथा- गरिवीको कारण ६ बर्षे छोरा र श्रीमती सहित पासो लाउने अवस्थामा पुगे (भिडियो हेर्नुस) - Nepali Mato
(शिशिर भण्डारी) होचो कदका गोपी मिजारले हामीलाई भेटेपछि आफ्ना सारा दुख सुनाए । गरिबीको मारमा परेका गोपीको दुख सांच्चै ठुलो रहेछ । उनले धेरैपटक ज्यान फाल्ने प्रयाश पनि गरेछन् । मलाई फोनमा पनि गोपीले शिशिर सर म तपाईलाई भेट्न नपाए ६ बर्षको छोरा र श्रीमती सहित पासो लाउँछु भनेका थिए ।
हामीलाई भेट्न नुवाकोटबाट गाउंका साथीसंग हजार रुपैंया मागेर आएका गोपी मिजारको ढिकुरेमा घर छैन । उनी बारीको पाटोमा पानी चुहिने र शौचालय नभएको कटेरोमा बस्दा रहेछन् । गोपीको मुखबाट अति दुखको कुरा..शौचालय नहुंदा प्लाष्टिकमा दिशा पिसाब गरेर फाल्नुपर्छ भन्ने सुन्दा मन भक्कानिएर आयो ।
हुन त गोपी आफुले जानेको काम पनि गर्छन् । उनी जुत्ता छाता बनाउंछन् । घरमा श्रीमती र ६ बर्षको छोरा छन् । अघिल्लो सन्तानको रुपमा जन्मिएकी अपांगता भएकी छोरीलाई उपचार गराउने क्रममा ऋण गरेर ३ लाख खर्च गरे तर बिडम्बना छोरीको ज्यान गयो ।
त्यसपछि उनी ऋणमा डुबे । बसेको ठाउंबाट जग्गा धनीले निस्केर जा भन्दैछ, ३ महिनादेखि भाडा तिर्न सकेको छैन, यसैबिच छोराको घांटीको अप्रेशन गर्नु पर्यो । यसैबिच गोपीको श्रीमतीले बिषादीको प्रयोग गरेर छोरा सहित जीवन त्याग्ने प्रयाश पनि गरिन् ।
दाउरा निकाल्न खोज्दा नसिरलाई बाढीले बगायो
शुस्मा कार्कीको आक्रोश: लेखिन् मेरो समाचार बनाउने ‘भिखारी’
अमीत बाबुको लय सिर्जना मा मनै रुवाउनी गीत “मुटु चोईटा चोईटा”
१९ बैशाख २०७६, बिहीबार १९:२७ May 3, 2019 Mahendra Muskan chhetri
उजाड बगरमा हरियो तरकारी,किन जान परो विदेश देश छाडी ?
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १८:४९ May 23, 2019 Nepali Mato
आज प्रताप दासको जन्म दिन, शुभकामना
२ भाद्र २०७६, सोमबार ०८:३४ August 19, 2019 Nepali Mato
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १३:२७ June 7, 2019 Nepali Mato
जग्गेबाटै बेहुला–बेहुली प्रहरीले नियन्त्रणमा,आखिर किन ?
३१ असार २०७६, मंगलवार ०८:५२ July 16, 2019 Nepali Mato